စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိဖို့ လိုတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိဖို့ လိုတယ်
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိဖို့ လိုတယ်
Posted by ကြယ်လေး on Jan 9, 2011 in Critic |3comments
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု
– ဆင်းရဲမွဲတေမှုအတွက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများကို အပြစ်တင်သူများရှိသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ဟုဆိုသည့် တံခါးပိတ်စီးပွားရေးပေါ်လစီအောက်တွင် ၁၉၈၇ ခုကတည်းက ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ LDC ဖြစ်နေခဲ့ရာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများထက် စောခဲ့ပြီး ယခုအနှစ် ၂ဝ ကြာ တံခါးဖွင့်ဈေး ကွက်စီးပွားရေး ဖြတ်သန်းခဲ့သော်လည်း LDC အဆင့်မှ မလွတ်မြောက် နိုင်ခဲ့ပေ။
– ဆူးအက်တူးမြောင်းကြောင့် အစောပိုင်းနှစ်ကာလများ၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆန်တင်ပို့မှုဖြင့် ချမ်းသာခဲ့ရာ သ ဘာဝသယံဇာတများမှာ မတို့ထိဘဲ ရှိခဲ့သည်။
– မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၆ဝဝ ခန့်ရခဲ့သည်။ ရွှေဓာတ်ငွေ့သိုက်မှ နှစ် ၂ဝ စာချုပ်ဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း ၂၄ဝဝဝ (တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၂ဝဝ) ရထားသည်။ (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးက ၄ဝ%၊ စစ်အုပ်စုဘက် သားများက ၆ဝ% ပိုင်သည့်) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်က ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းချမှု ၆ဝ% ကိုရရှိသည်။ ခြောက်လတကြိမ် ကျောက်မျက်ရောင်းချမှုမှ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၁ဝဝ ခန့်ရသည်။
– နိုင်ငံခြားငွေအရံ ဒေါ်လာသန်း ၆ဝဝဝ ကျော်ရှိနေရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူတို့၏ဘဝများကို ပြောင်းလဲသွား အောင် လုပ်နိုင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးရင်းမြစ်များရှိနေသည်။ သို့သော် စစ်အုပ်စုသည် မြောက်ကိုးရီးယားအကူ အညီဖြင့် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကွန်ယက်ကြီးကို ဒေါ်လာသန်း ၃ဝဝဝ သုံးစွဲတည်ဆောက်နေသည်။ မြန်မာလေတပ်အတွက် ရုရှား လုပ် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ လေယာဉ်များဝယ်ရန် ယူရိုငွေသန်း ၄ဝဝ သုံးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အစိုးရအ သုံးစရိတ်မှာ ဂျီဒီပီ၏ ၁% မရှိဘဲ ပညာရေးအတွက်လည်း ၂% မရှိခဲ့ပေ။ တချိန်တည်းတွင် စစ်အသုံးစရိတ်မှာမူ (၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ တွင်) ၄ဝ% ကျော်ခဲ့သည်။
– ဝီကီလိက်ကြေးနန်းများအရ စစ်အစိုးရသည် ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့မှ ဝင်ငွေများ တိုးတက်ရရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာ ပြည်သူတို့၏ဘဝကို တိုးတက်အောင် ဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်သံအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင် ၂ဝဝ၈ ခု ဇန်နဝါ ရီ ၁၈ ရက်တွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။
– ဂျီဒီပီ ထဲတွင် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း။ မိုဇမ်ဘစ် ၅. ၉ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၂. ၁ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၁. ၉ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
– ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် အထွေထွေအစိုးရပိုင်း၏အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၇၁. ၉ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၇၁. ၈ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၁၃. ၄ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၁၁. ၇ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
– ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်း၏အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၂၈. ၁ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၂၈. ၂ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၈၆. ၆ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၈၈. ၃ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
– အထွေထွေအစိုးရအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၁၇. ၉ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၁၂. ၆ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၁. ၂ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ဝ. ၉ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
– ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းထဲတွင် ပြင်ပရင်းမြစ်များပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဇမ်ဘစ် ၂၆. ၄ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၅၇. ၈ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)၊ မြန်မာ ၁. ၁ (၂ဝဝဝ ခုနှစ်) နှင့် ၇. ၆ (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်)
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့် တရုတ်ဆရာ ပိုအကြိုက်တွေ့လာမှု
ကုလားကော ‘ယ’ပက်လက်ပါ အချဉ်ခွက်တွေ့တာ